Herisetra tamim-behivavy :: Any am-ponja vonjimaika ilay rain-janak’i Tahisy • AoRaha
Noentina teny amin’ny Fampanoavana, omaly, ny valin’ny fanadihadiana nataon’ny polisy momba ny raharaha fahafatesan’i Tahisy, ilay vehivavy maty teo am-piterahana, herinandro lasa izay. Niatrika ny mpitsara mpanao famotorana ny olona efatra ambin’ny folo nohadihadian’ny polisy, izay nahitana ny fianakavian’i Tahisy sy ny an’ilay rain-janany ary mpampivelona sy mpitsabo. Voatazona am-ponja vonjimaika i Fanantenana na i Fana, ilay rain-janak4I Tahisy, sy ny mpitsabo iray.
Niparitaka sy nalaza tao amin’ny tambazotran-tserasera « facebook » ny tantaran’i Tsilavina na i Tahisy, tovovavy, 21 taona, namoy ny ainy niaraka tamin’ny zanany teo am-piterahana. Nisy ny nilaza fa niharan’ny herisetra sy vono nataon’ny rain-janany io tovovavy io, fony fahavelony tao amin’ireo fanehoan-kevitra tamin’ny soratra navoakan’ilay renin-janany tamin’ny « facebook ». Nitondra fanazavana sy ny zavatra fantany tamin’ny fahitalavitra tsy miankina vitsivitsy ny fianakaviany, taorian’izay. Nanokatra fanadihadiana, tetsy an-kilany, ny eo anivon’ny Polisim-pirenena.
Herisetra sy fanafody
«Tsy nisy ny mpitory sy ny olona toriana tamin’io raharaha io. Vita ny fanadihadiana ka ny teny amin’ny Fitsarana no tompon’ny fanapahan-kevitra. Nalefa any am-ponja noho ny herisetra nataony tamin’i Tahisy i Fanantenana rain-janany. Noho ny fanomezana fanafody tsy mifanaraka amin’ny lalàn’ny fitsaboana kosa no nanagadrana an’ilay mpitsabo”, hoy ny polisy.
Milaza ny fianakavian’i Tahisy tonga teny amin’ny Fitsarana fa hangataka ny hamindrana ny vatana mangatsiakan’i Tahisy mianaka any amin’ny fasan-drazan’izy ireo, raha voamarina ara-pitsarana fa nisy tokoa ny herisetra nihatra taminy, tamin’ny fahavelony.
Tsy hadinoina ihany koa fa isan’ireo naneho hevitra tamin’ity raharaha ity ny vadin’ny Filoham-pirenena, Mialy Rajoelina, izay sady filohan’ny fikambanana Fitia. Nanambara ny fanarahany akaiky an’io toe-javatra io izy, sady nanamafy ny maha-zava-dehibe sy nilàna ny lalàna miady amin’ny herisetra, rehefa tahaka an’iny tranga nihatra tamin’i Tahisy iny.
Fanolanana sy fifamotorana :: Lehilahy voatondro ho nahabevoka ny zanany vavy, 15 taona
Fitaka sy hala-bola :: Sarona ireo mpisoloky ao amin’ny tambajotra « Facebook »